Ny vehivavy dia tia ny akanjo
Ny endriky ny vehivavy tahaka an'io amin'ny akanjo dia mifandray, voalohany indrindra, miaraka amin'ireo fombafomba fialan-tsasatra amin'ireo kintan'i Hollywood, feno endrika, fahamendrehana ary hatsarana. Ity zava-niseho amin'ny lamaody dia vaovao vaovao, ny endri-pirazany manokana dia mitazona ny silhouettes sy ny fihenam-bidy, ny fisafidianana mazava tsara sy ny tsy fahampian'ny endrika.
Ny akanjon'ny vehivavy toa
Ny endriky ny vehivavy dia toa tsy nisy hatry ny ela, ity lamaody maoderina ity dia lamaody, fa ny fakany dia mandeha amin'ny lamaody 1950-1960. Ny ankizivavy tena tia dia azo antsoina amim-pahatokian-tena antsoina hoe Diana Diana, Jacqueline Kennedy , Audrey Hepburn. Anisan'ireo kintana maoderina miaraka amin'ity fomba ity, ny fiarahan'ny Victoria Beckham dia mifandray voalohany indrindra. Izany fomba izany dia arahan'ireo vehivavy voalohany avy amin'ny fanjakana maro, izay nampianarina hanaja ny vehivavy, saingy tsy miharihary.
Ny akanjon'ny vehivavy toy ny akanjo toy ny ankamaroany dia manana silhouette mifanaraka na mifanintona. Ny akanjo marevaka sy ny lobaka amin'ny lamosina dia mety ho eo ambonin'ny lohalika, fa tsy tonga amin'ny antsipirihany mini. Ho an'ny zatovovavy dia manintona loko, loko pastel, vehivavy zokiolona afaka manome vola akanjo mena, mainty sy loko hafa. Lady Laik dia manavaka ny fitiavany ny loko amam-boninkazo, ny sary ho an'ny tara-pokontany, ny tady, ny tongony. Ny akanjo lava indrindra dia akanjo sy pataloha misy tsotsotra, akanjo marevaka. Mba hanavaozana ny endrik'ireo tovovavy dia manao akanjo toy izany, mametraka ny akanjon'ireo akanjo maoderina sy cardigans.
Kiraro sy akanjo
Ny akanjo ho an'ny vehivavy dia tokony hijery tsara sy hentitra toy ny azo atao ihany koa. Amin'ny ankapobeny, aleon'ireny tovovavy ireny ny kiraro sy ny kiraro amin'ny kiraro miaraka amin'ny boribory eo amin'ny voditongotra, matetika avo lenta, amin'ny savily maina. Ny boot dia tokony manana kiraro tena tsara. Ilaina koa ny mandinika tsara ilay fitaovana - tsy maintsy ilaina ny loko avo lenta na ny akora misy ny loko ambany.
Ny fitaovana ho an'ny zazavavy toy ny vehivavy dia manana andraikitra lehibe: mamita ny sary izy ireo ary manome azy glamour sy ny fahalavorariana ilaina. Noho izany, ao am-paladonan'ny vehivavy lamaody toy izany dia tokony hisy karazan-tsiroarana sy karavarazo vita amin'ny sehatra sy chiffon. Noho ny fanampian'izy ireo dia afaka mamorona sary iray tokana ny zazavavy, hanohana ny fanontam-pirinty amin'ny iray amin'ireo zavatra tena manan-danja, mba hampisehoana ny tendany mamirapiratra. Ao an-dakilasy ihany koa dia tokony ho farafaharatsiny iray ny kitapo lehibe amin'ny endrika henjana sy marika maromaro ho an'ny fandehanana amin'ny hariva. Amin'ny firavaka dia tsara kokoa ny mifidy gizmos rafitra amin'ny endrika klasika, firavaka firavaka dia tokony ho tsara kalitao sy marina, mba hahafahany mitafy amin'ny firavaka.
Inona no tokony hatao amin'ny kapa?
Sakafo avy amin'ny mayonnaise
Ny sakafo hariva mandritra ny 10 andro
Afaka manasa hamsterina ve aho?
Ahoana no hanamboarana karpitra ao anaty oven ao anaty fo?
Ny fihenan'ny nervey any ambany
Famindrana ny ankilany
Toe-tongotra mitongilana amin'ny ankizy
Sandelika misy orona mihidy - inona ary izy ireo?
Osteoporose - soritraretina sy fitsaboana
Ny fotsy hoditra - fampiharana
Ny lanjan'ny expander - ny fampiasana tsara indrindra ho an'ireo antokon'olona rehetra
Chashushuli any Zeorziana - fomba tsara indrindra hanomanana sakafo mahasalama Caucasiana
Miakanjo miaraka amin'ny fofona ho feno